Paikady 14 hampitomboana ny vola miditra amin'ny tranokala ecommerce | Martech Zone
Paikady 14 hampitomboana ny vola miditra amin'ny tranokala ecommerce anao
Talata, Septambra 16, 2014 Alatsinainy, Septambra 15, 2014 Douglas Karr
Izahay maraina dia nizara paikady 7 ho an'ny fampitomboana ny fandaniana amin'ny mpanjifa amin'ny toerana fivarotanao. Misy teknika tokony haparitanao ao amin'ny tranokalan'ny ecommerce anao koa! Dan Wang nizara lahatsoratra momba ny hetsika azonao atao ampitomboy ny vidin'ny kalesin'ny mpivarotra anao ao amin'ny Shopify ary ReferralCandy dia naneho ireo fihetsika ireo amin'ity sary ity.
Hatsarao ny volanao fivarotana amin'ny fanangonana fanamarihana sy fiovana lohahevitra.
Manaova fanolorana fivoahana handresena lahatra ireo mpitsidika tsy hiova finoana alohan'ny andehanany.
Mampiasà mailaka amim-pahendrena hitarika fifamoivoizana mankany amin'ny fivarotanao ary hiteraka varotra tsara kokoa noho ny media sosialy.
Mifandraisa matetika amin'ny alàlan'ny fandefasana taratasim-baovao mahazatra miaraka amin'ny fifanarahana sy fihenam-bidy.
Manatsara ny fandaniana amin'ny doka amin'ny alàlan'ny fanandramana sy fiovan'ny teny fanalahidy hahafahana mikendry ny fampielezan-kevitrao.
Fanamarihana ara-tsosialy amin'ny alàlan'ny fangatahana sy fitazonana fanamarihana sy naoty tsara amin'ny vokatrao.
Tombano ny varotra amin'ny ho avy amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo entana ho ivelan'ny tahiry handrefesana ny zanabola.
Vokatra avo lenta amin'ny fampisehoana vokatra mifandraika izay mitovy amin'ny vidiny mitovy amin'izany.
Ahenao ny fialana amin'ny sarety amin'ny alàlan'ny fampiasana programa mailaka sy fanarenana doka ho an'ireo mpitsidika hiverina amin'ny saretiny.
Fampahatsiahivana ny lisitra faniriana dia mailaka mailaka mitondra ny olona hanao ilay fividianana. Manampia varotra na mividy info hampitomboana ny fahalianana.
Ampidiro ny fizarana fanomezana miaraka amin'ny vokatra tsy manam-paharoa. Matetika izy ireo dia mampitombo ny tombom-barotra!
Mandrosoa fivarotana Facebook hivarotra mivantana amin'ireo mpampiasa Facebook ary hahazo fampahalalana bebe kokoa amin'ny alàlan'ny media sosialy.
Midira amin'ny Instagram amin'ny alàlan'ny fanaovana fifaninanana, mampiseho ao ambadiky ny seho miasa, ary mizara ny sarin'ny mpanjifa amin'ny vokatrao.
Mampiroborobo ny teny ambava amin'ny alàlan'ny fitadiavana sy valisoa ireo influencer izay afaka mahatratra ny mpihaino kendrenao.
Miaraka amin'ny vaovao vao haingana momba ny Apple Pay, Ampiako koa ny fampidirana ireo fomba ahafahana mizaha mora kokoa, miantsena ary mividy amin'ny alàlan'ny finday dia mety ho iray amin'ireo paikady manan-danja indrindra ankehitriny amin'ny fitarihana varotra bebe kokoa!
Tags: ad-ny fandanianafandaozana saretyfanavaozana fiovam-pomandany ny mpanjifadan wangecommercefamolavolana ecommercemailaka ecommercehevitra ecommercefanatsarana ny ecommercetolotra fivoahanaFacebookvarotra amin'ny ho avyfanomezanafanomezanaampitomboy ny sarety fiantsenanaampitomboy ny lanjan'ny kalesy fiantsenanamampitombo ny fandanianaInstagramfisafidianana teny lakilefandaniana amin'ny Internetritramampihena ny fandaozana saretymampihena ny fandaozana ny sarety fiantsenanashopifyharona fiantsenanaporofo ara-tsosialyfamolavolana magazayWishlistteny vava
Paikady 7 amin'ny fampitomboana ny fandaniana amin'ny mpanjifa amin'ny magazanao fivarotana
Ballparker: Mamorona tombana amin'ny fanamorana